IFiber & Textile Factory-China Fiber & Textile Manufacturers, Suppliers
Preperse R. DBP – Phambi...
I-Preperse Y. WGP-I-Pre-dispe...
Preperse Y. 4GS – Phambi...
Preperse B. BPS – Phambi...
I-Solvent Yellow 185 yidayi yefluorescent eluhlaza okwesibhakabhaka.
Inokumelana nobushushu obulungileyo kunye nokumelana nokukhanya, ukuxhathisa okulungileyo kokufuduka kunye namandla aphezulu e-tinting kunye nesicelo esibanzi.
Ungayijonga i-TDS yeSolvent Yellow 185 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 179 / CAS 80748-21-6
I-Solvent Yellow 179 yidayi eluhlaza etyheli ebonakalayo.
Inokumelana nobushushu obugqwesileyo kunye nokumelana nokukhanya, ukuxhathisa okuhle kokufuduka.
Ingasetyenziselwa umbala kwiiplastiki, i-PS, i-ABS, i-PMMA, i-PC, i-PET, i-polymer, i-fiber, i-inki yokuprinta.
Kunconywa kakhulu kwifiber yepolyester.
Uyakwazi ukujonga i-TDS yeSolvent Yellow 179 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 176 yidayi ye-oyile ebonakala ngathi tyheli.
Ukufaka imibala kwiiplastiki, i-PS, i-ABS, i-PMMA, i-PC, i-PET, i-polymer, i-fiber, i-inki.
Singanikezela ngeSolvent Yellow 176 SPC kunye ne-mono-masterbatch.
Nceda ujonge i-TDS yeSolvent Yellow 176 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 163 / CAS 13676-91-0/106768-99-4
I-Solvent Yellow 163 yidayi enyibilikayo etyheli etyheli ebonakeleyo yeoli.
Inokumelana nobushushu obugqwesileyo kunye nokumelana nokukhanya, ukuxhathisa okulungileyo kokufuduka kunye namandla aphezulu e-tinting kunye nesicelo esibanzi.
I-Solvent Yellow 163 isetyenziselwa ukufaka imibala kwiiplastiki, i-PS, i-ABS, i-PMMA, i-PC, i-PET, i-polymer, i-fiber.Ncoma ukuba isetyenziswe kwimpahla yemoto, ii-inki ezibandakanya i-inki ye-inkjet.
Nceda ujonge i-TDS yeSolvent Yellow 163 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 160: 1 / CAS 35773-43-4
Solvent Yellow 160:1 yidayi etyheli etyheli eluhlaza.
I-Solvent Yellow 160:1 ivumelekile ukuba isetyenziswe kwifiber yepolyester, kwaye iyancipha isetyenziswe kwi-PA6 fiber.
Uyakwazi ukujonga i-TDS yeSolvent Yellow 160:1 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 157 / CAS 27908-75-4
I-Solvent Yellow 157 yidayi enyibilikayo etyheli etyheli eluhlaza.
I-Solvent Yellow 157 isetyenziselwa ukufaka imibala kwiiplastiki, i-PS, i-ABS, i-PMMA, i-PC, i-PET, i-polymer, i-fiber.Kucetyiswa ukuba isetyenziswe kwi-textile yemoto.
Nceda ujonge i-TDS yeSolvent Yellow 157 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 114 / CAS 7576-65-0/75216-45-4/12223-85-7
I-Solvent Yellow 114 yidayi enyibilikayo etyheli eluhlaza.
I-Solvent Yellow 114 inokumelana nobushushu okulungileyo kunye nokumelana nokukhanya, ukuxhathisa okulungileyo kokufuduka kunye namandla aphezulu okuthambisa kunye nesicelo esibanzi.
Isetyenziselwa ukufaka imibala kwiiplastiki, i-PS PET ABS PC (i-polyolefin, i-polyester, i-polycabonate) iiplastiki, i-fiber kunye ne-inki yokuprinta.
Ukulingana kwayo yiSolvaperm Yellow 2G, Yellow GS, Yellow G.
I-Solvent Yellow 114 ikwabizwa ngokuba yi-Disperse Yellow 54 yee-inki, kubandakanya inki ye-inkjet.
Uyakwazi ukujonga i-TDS ye-solvent Yellow 114 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 98 / CAS 12671-74-8/27870-92-4
I-Solvent Yellow 98 yidayi yefluorescent eluhlaza okwesibhakabhaka.
I-Solvent Yellow 98 ivumelekile ukuba isetyenziswe kwifiber ye-polyester kunye ne-PA6 ifayibha, encinci isetyenziswe kwi-PA66 fiber.
Ungayijonga i-TDS yeSolvent Yellow 98 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 93 / CAS 4702-90-3/61969-52-6
I-Solvent Yellow 93 yidayi ye-oyile ekhanyelayo emthubi.I-Solvent Yellow 93 inokumelana nobushushu okulungileyo kunye nokumelana nokukhanya, ukuxhathisa okulungileyo kokufuduka kunye namandla aphezulu okuthambisa kunye nesicelo esibanzi.I-Solvent Yellow 93 isetyenziselwa ukufaka imibala kwiiplastiki, i-PS PET ABS PC (i-polyolefin, i-polyester, i-polycabonate) iiplastiki, ifayibha.Uyakwazi ukujonga i-TDS yesinyibilikisi esiYellow 93 ngezantsi.
I-Solvent Yellow 21 / CAS 5601-29-6
I-Solvent Yellow 21 yidayi etyheli.
Inokumelana nobushushu obulungileyo kunye nokumelana nokukhanya, ukuxhathisa okulungileyo kokufuduka kunye namandla aphezulu e-tinting.
I-Solvent Yellow 21 ingasetyenziselwa ukufaka imibala kwiiplastiki, ezicetyiswayo kwi-PA kunye ne-PA ifayibha yepolyester, enokukhanya okugqwesileyo okugqwesileyo, ukumelana nokuhlamba, ukuxhathisa ukukhuhlana.
Uyakwazi ukujonga i-TDS yeSolvent Yellow 21 ngezantsi.
I-Solvent Orange 107 / CAS 185766-20-5
I-Solvent Orange 107 yidayi e-orenji enamandla ombala ophezulu.
I-Solvent Orange 107 isetyenziselwa ukufaka umbala kwiiplastiki, i-PS, i-ABS, i-PMMA, i-PC, i-PET, i-polymer, i-fiber.I-Solvent Orange 107 iyacetyiswa kwifiber yepolyester.
Uyakwazi ukujonga i-TDS ye-Solvent Orange 107 ngezantsi.
I-Solvent Orange 63 / CAS 16294-75-0
I-Solvent Orange 63 yidayi e-orenji ye-fluorescent.
I-Solvent Orange 63 isetyenziselwa ukufaka umbala kwiiplastiki, i-PS, i-ABS, i-PMMA, i-PC, i-PET, i-polymer, i-fiber.I-Solvent Orange 63 inconywa i-polyester fiber kunye ne-PA6 fiber, ukusetyenziswa okulinganiselwe kwi-PA66 fiber.
Uyakwazi ukujonga i-TDS ye-Solvent Orange 63 ngezantsi.